မျက်လုံး ထဲက အရောင်
ပါးပြင်ကကောက်ကြောင်း--- မျက်နှာဖုံး အောက်မှာ ပျောက်ကွယ်။
ဟန်ဆောင်ရင်း-ဖုံးကွယ်ရင်း--- ၂မျက်နှာ ၂ ဘ၀--
တချက်ပြုံးတိုင်း --နှလုံးက သွေးထွက်တယ်--ရင်ဘတ်က ကွဲလို.
ကမ္ဘာကြီး က ပညာရှိလား။
မျက်နှာဖုံးဝတ်တို.၏ ငိုခြင်း ရီခြင်း---သူသိဖို.လိုလို.လား။
နိုး နိုး၊ မရဘူး။
သိလိုသမျှ မျက်နှာဖုံးကိုပဲ ကြည်.ကြပါ။
ဒဏ်ရာဗလပွနဲ. ကြွေလွင်.၀ိညာဉ် တို. ထလာပြီ။
အောက်ကိုကြည်.၊ အသူရာ မြေသား နက်ရှိုင်းဝေးလံပါ.
မျက်နှာဖုံးဝတ်တွေ ရပ်တဲ.မြေ---ရွှံ.သား-- အပျော.စား အပေါစား--
ဒီမြေက တဖြည်းဖြည်း ပြိုနေပြီ။
သူကြိုက်သလို သာ အိပ်မက်မက် ခိုင်းတော.။
Translated by (aasw)